Motivation for success :: आजदेखि खुल्यो रिभर फल्सको आईपीओ, कैले सम्म दिन पाइन्छ आबेदन हेर्नुहोस् ?
आजदेखि खुल्यो रिभर फल्सको आईपीओ, कैले सम्म दिन पाइन्छ आबेदन हेर्नुहोस् ?
काठमाडौं – आजदेखि सर्वसाधारणका लागि साधारण सेयर (आईपीओ) को बिक्री खुलाएको रिभर फल्स पावर कम्पनी​को प्रतिसेयर नेथवर्क आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा ८८।६६ थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ ८९।६३ रुपैयाँ थियो । यसैगरी, २०७८ पुस मसान्तमा ८६।६१ रुपैयाँ रहेको कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ चालू आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा ९२।५६ रुपैयाँ र आगामी आर्थिक वर्षमा १०२।७१ रुपैयाँ पुग्नेछ ।
यसैगरी, २०७५ सालमा प्रतिकित्ता १।०६ रुपैयाँ रहेको आम्दानी चालू आर्थिक वर्षमा बढेर १०।०५ रुपैयाँ पुगेको छ । यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षमा यसको प्रतिसेयर आम्दानी १३।४७ रुपैयाँ पुग्ने धितोपत्र बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
कम्पनीले प्रबद्र्धन गरिरहेको १०।३० मेगावाट क्षमताको पिलुवा खोला जलविद्युत आयोजनाको कूल अनुमानित लागत प्रति मेगावाट १८ करोड ६ लाख १५ हजार रुपैयाँ छ । उक्त आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन अनुमती पत्र बहाल रहने अवधि २०७० सालदेखि २१०५ सम्म छ । यसैगरी, ६।३२ वर्षमा कम्पनीको गरिएको लगानी फिर्ता हुने छ ।